Soo dejisan Hotspot Shield 6.0.4 Free – Windows – Vessoft
Soo dejisan Hotspot Shield
Kulkulul Shield – software ah si loo hubiyo ammaanka iyo arimaha gaarka ah ee internetka. software waa ay awoodaan in ay ka aamin xidhiidhka ka dhexeeya kombiyuutarka user ee server iyo colaaduhu saameeyeen Shield, oo bixiya dhirta qarsoodiga ah boggaga web ay sabab u tahay isbedelka ku meel gaar ah oo IP-address. Kulkulul Shield siinayaa helaan to content ee dhibqabayaashooda iyo websites hor istaagay sababo kala duwan. Kulkulul Shield bixisaa xog kala iibsiga aamin badan oo xidhiidh ah lo iyo ilaalinta spyware ah.
Taageerada shabakadaha Wi-Fi banki iyo
joogtid An qarsoodi ah ee internet-ka
Helitaanka goobaha tixan
encryption Automatic ah gaadiidka
Comments on Hotspot Shield:
Hotspot Shield Software la xiriira:
Internet Network Imtixaanka Set xorta ah ee korontada network in la isugu software hal. Fursado ballaaran oo ay gacanta ku shabakadda ayaa diyaar u ah user ah.
English, Français, Deutsch, Italiano... Ammyy Admin 3.5
Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro iyo Internet
العربية, English, Français, Español... Genymotion 2.6.0
Horumarinta Mid ka mid ah database dunida caan ka ah SQL ah. Software wuxuu hubinayaa xawaaraha sare, habboonaan iyo fududaato isticmaalka.
English, Українська, Français, Español... RogueKiller 11.0.8
Antiviruses Qalab weyn in lagula dagaalamo ka dhanka ah fayrasyada ee noocyada kala duwan. Software wuxuu isticmaalaa farsamooyinka kala duwan si loo ogaado hanjabaad iyo awood u si fudud iyaga tirtirto.
العربية, English, Français, Español... Android SDK Manager 23.0.2
Horumarinta Deegaanka horumarinta ee codsiyada Android. Software wuxuu taageeraa horumarinta codsiyada in la macaamilaan GPS, Wi-Fi, Bluetooth iyo camera qalabka.